Daan-daansiga (bahdilka) shaqada | Suomen Mielenterveysseura
Daan-daansiga shaqada loolama jeedo wax walba oo iska hor imaad ah oo shaqada ka dhaca. Daandaansiga ama bahdilku waa marka uu yahay mid qofkaas lagu beegsanayo ama mudo dheer socdey, isla markaasna loogu talogalay. Daan-daansigaas qofku wuxuu u dareemi karaa si cidhiidhi ah, xumaan iyo qiimo la,aan ah. Loo shaqeeyaha ama shaqo bixiyaha waxaa xaq loogu leeyahay inuu arintaas oo kale wax ka qabto.
Daan-daansiga goobaha shaqada ka dhaca waxaa loo baahanyahay in isla markiiba wax laga qabto. Sida ugu dhaqso badan ee arinta wax looga qabto ayey ku xidhan tahay in dhibka la soo af-jaro. Daan-daansiga oo waqti dheer socda wuxuu qofka dhaxalsiin karaa culeys badan oo maskaxeed kaas oo keeni kara niyadjab.
Haddii daan-daansigaas laga qabto shir, codso in laga qoro xusuus-qor. Kaydi dhammaan fariimaha la xidhiidha daan-daansiga sidoo kale haddii ay jiraan saaxiibo shaqada oo arintaas dareemay kala hadal. Marka laga reebo inay dadkaasi yihiin markhaatiyaal muhiim ah, Haddana waxaa laga yaabaa in qof dadkaas ka mid ahi uu la kulmay daan-daansigaas oo kale adna aadan ogeyn.
Waa muhiim in qofka la daan-daansaday uu arintaas kala hadlo dad kale. Marka qofku uu arintaas kala hadlo saaxiibada shaqada, saaxibadiisa kale ama xubno ka mid ah reerkiisa waxaa u suuroobaysa in arinta uu fahmo.
Haddii arintu ay sii socoto waxaa aad u muhiim ah in qofku uusan arinta ku kaliyeysan ee uu ka hadlo. Haddii arintu ay sii adkaato waxay noqon kartaa mid cudur ama dhibaato, ku noqota qofka, taas oo isu badeli karta hurdo la’aan, qofka oo cidhiidhi dareema ama xannuun aan sabab loo helin.
Xafiiska caafimaadka shaqaalaha shebekadiisa Työterveyslaitoksen internet-sivuilta ayaa laga heli karaa akhbaar muhiim ah oo la xidhiidha sida qofku yeeli karo haddii uu daan-daansi ama bahdil kala kulmo goobta shaqada.